> Resource> Video> Olee iji Gbochie Face na Video
Gịnị ka ị na-eme mgbe mmadụ na-awagharị n'ime gị video, na ị na-adịghị ikike na-agụnye ha? Iji chebe nzuzo, ị kwesịrị ị na-egbochi ihu na videos. Ma, ọtụtụ ndị video edezi omume dị na ahịa taa adịghị ekwe ka ị ghara ịma naanị obere òkè nke ihuenyo. Ị ma ghara ịma dum video ma ọ bụ ị ghara ịma ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị chọrọ igbochi ihu na video, ị ga-mkpa iji a dị iche iche video edezi ngwá ọrụ. Ihe kacha ngwá ọrụ m na hụrụ maka igbochi ihu na video bụ Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Ọ na-akpaghị aka tracks ọnọdụ na adiana nke ihu gị video, nke na-ahapụ gị igbochi si ihu enweghị ihe ọ bụla hassle. Ugbu a lelee nzọụkwụ n'okpuru iji hụ otú igbochi ihu na video iji nzọụkwụ n'okpuru.
1 Mbubata lekwasịrị video
Wụnye na ẹkedori Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Pịa "Import" button, mgbe ahụ, ịnyagharịa na abụọ-pịa a video faịlụ. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe video ka usoro ihe omume. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) akwado iche iche video formats dị ka FLV, MKV, MP4, MOV, mpg, MPEG, VOB na ga-akpaghị aka Ibu Ibu video n'ihi na ị na dezie.
2 Malite igbochi ihu na video
Mgbe ahụ, mata video na ikpuru na dobe ya ndị video track nke usoro iheomume otiti. Right pịa ma họrọ "Ike Ngwá Ọrụ". Mgbe ahụ a window ga-gbapụta. Na nke a window, ịgbanwee gaa na "ihu Off" submenu na-ahọrọ "Mee Face Off ka clip". Ka ị pụrụ ịhụ, e nwere dị iche iche ihu anya mmetụta n'ihi na ị na-ahọrọ. Ị nwere ike ma bulie mfe Mozis mmetụta ma ọ bụ ndị ọzọ na-akpa ọchị akara dị ka amasị gị. Ozugbo ị na-ahọrọ, usoro ihe omume ga-ozugbo etinye mmetụta na ihu ya achọpụtara.
Rịba ama na nchọpụta ihu nwere ike ghara ịbụ 100 percent-ezi ezi. Mgbe ụfọdụ ụfọdụ ihu gaghị egbochi si. Iji mee ka ọ elu, gaa na "Mozis" submenu na nne Mmetụta "Mee Mozis ka clip" na pịa "Tinye". Bịaruo a igbe n'elu ihu na mkpa a ga-egbochi si- niile na-eme.
3 Zọpụta ọhụrụ faịlụ
Mgbe ahụ, pịa "Play" button ịhụ N'ihi. Ọ bụrụ na afọ ju, see "Mepụta" bọtịnụ na họrọ otu nke mmepụta ụzọ na mmapụta elu window. Ebe i nwere ike ịhọrọ ichekwa na a ụfọdụ format, ọkụ na-DVD ma ọ bụ ozugbo ịkọrọ ọhụrụ video on YouTube ma ọ bụ Facebook.
Top Iri nrụọrụ ịgbazite 3D Videos Online
MOD joiner: Olee otú Jikọọ MOD Files